'Fihetsika tsara sitra-po': nesorin'i Makedonia an'i Alexander Lehibe amin'ny anaran'ny seranam-piaramanidina
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » 'Fihetsika tsara sitra-po': nesorin'i Makedonia an'i Alexander Lehibe amin'ny anaran'ny seranam-piaramanidina
Nanapa-kevitra ny governemanta Makedoniana hanova anarana ny seranam-piaramanidina lehibe an'ny firenena izay nitondra ny anaran'ny mpanjaka mpiady taloha Alexander the Great, ho Skopje International Airport, tamin'ny fihetsika tsara natao tamin'i Greece mpifanila vodirindrina aminy.
Ny consortium Tiorka TAV, izay miasa amin'i Skopje Alexander the Great Airport, dia nanomboka nanala ireo litera mirefy 3 metatra (9.8 metatra) izay nanoratra ny anarana tao amin'ny terminal ny sabotsy.
Ny anarana vaovaon'ny seranam-piaramanidina dia ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Skopje. Nantsoina hoe Seranam-piaramanidina Skopje talohan'ny nanalan'ny governemanta Makedônia azy ho an'i Alexander tamin'ny 2006.
Makedonia sy Gresy no miasa mba hamahana ny fifanolanana mandritra ny 25 taona ny amin'ny anaran'i Makedonia.
Nilaza i Gresy fa ny fampiasan'i Makedonia azy rehefa nahazo fahaleovan-tena tamin'ny taona 1991 dia midika ho fitakiana faritany any amin'ny faritany Makedonia, toerana nahaterahan'i Alexander.
Ny governemanta ankehitriny koa dia mikasa ny hanova ny làlambe mitondra ny anaran'i Alexander ho Prijatelstvo, izay Makedoniana ho mpinamana.
Fiainana toy ny lanezy any Hawaii
Ny Turkish Airlines dia mandefa ny serivisy ho any amin'ny toerana faha-52 misy azy atsy Afrika